Vaovao - Karazan'asa vita amin'ny rafi-pamokarana 9-8
Karazan-tsarimihetsika miasa ho an'ny rafitra betonta 9-8
Ny fitaovana fananganana beton, noho ny fananany miavaka dia ampiasaina betsaka hamoronana singa fananganana. Tsy maintsy araraka ao anaty lasitra natao manokana izy io, izay antsoina hoe formwork na fikatonam-baravarana.
Formwork mitazona ny beton narotsaka amin'ny endriny mandra-pahatonga azy hihamafy sy hahazoana tanjaka ampy hanohanana ny tenany sy ny firafitry ny lanjan'ny fitaovana. Ny formwork dia azo sokajiana amin'ny fomba maro:
Amin'ny alàlan'ny fitaovana
Amin'ny toerana ampiasaina
Ny formwork dia manana andraikitra lehibe amin'ny fananganana beton. Tsy maintsy manana tanjaka ampy hiaretana ny enta-mavesatra rehetra misy mandritra ny fandefasana azy ireo, ary avy eo dia tokony hihazona ny endriny izy rehefa mihamafy ny beton.
Iza avy ireo fepetra takiana amin'ny fiasa tsara?
Na dia maro aza ny fitaovana ampiasaina, ireto manaraka ireto dia fiasa fampisehoana ankapobeny mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fananganana beton:
Mahay ny enta-mavesatra.
tazomy amin'ny endriny feno ny endriny.
Porofo mivaingana amin'ny beton.
Ny simenitra tsy simba rehefa manala ireo formwork.
Azo ampiasaina indray ary ampiasaina indray ny fitaovana aorian'ny androm-piainany.
Ny fitaovana formwork dia tsy tokony hikorontana na hanodikodina.
Karazan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny fitaovana:
Ny fandrafetana hazo dia iray amin'ireo karazana formwork voalohany nampiasaina. Izy io dia mivory eo an-toerana ary izy no karazana mora miovaova, namboarina mora foana. Ny tombony:
Mora ny mamokatra sy manala
Maivana, indrindra raha ampitahaina amin'ny formwork metaly
Azo atao, mamela ny endrika, habe ary haavon'ny rafitra vita amin'ny beton
Ara-toekarena amin'ny tetikasa kely
Mamela ny fampiasana ny hazo eo an-toerana
Na izany aza, manana lesoka ihany koa:manana androm-piainana fohy izy io ary mandany fotoana amin'ny tetikasa lehibe. Amin'ny ankapobeny, ny fitrandrahana hazo dia asaina rehefa ambany ny vidin'ny asa, na rehefa mila fizarana miovaova ny paikady sarotra dia tsy averina matetika ny firafitry ny fananganana.
Matetika ampiasaina amin'ny hazo ny trondro. Izy io dia fitaovana vita amin'ny hazo vita, izay misy amin'ny habe sy ny hateviny. Amin'ny rindranasa formwork, dia ampiasaina indrindra amin'ny lambam-pandriana, ny fametahana ary ny firakofana.
Ny formwork vita amin'ny gitara dia manana fananana mitovy amin'ny famolavolana hazo, ao anatin'izany ny tanjaka, faharetana ary maivana.
Metallic Formwork: Steel sy Aluminium
Ny famolavolana vy dia nanjary nalaza noho ny androm-piainany nandritra ny fotoana lava sy ny fampiasana betsaka. Na dia lafo aza izany, dia ilaina amin'ny famolavolana tetikasa marobe ny formwork vy, ary safidy azo atao io raha toa ka antenaina ampiasaina betsaka.
Ireto misy sasany manasongadina ny asan'ny vy:
Mahery sy mateza, miaraka amin'ny androm-piainany lava
Mamorona famaranana malama eo ambonin'ireo beton
Mampihena ny vokatry ny tantely amin'ny beton
Mora napetraka ary rava
Mety amin'ny rafitra miolakolaka
Ny famolavolana alimina dia mitovy amin'ny famolavolana vy. Ny tena maha samy hafa azy dia ny aliminioma manana hakitroka ambany noho ny vy, izay mahatonga ny formwork ho maivana kokoa. Ny Aluminium koa dia manana tanjaka ambany noho ny vy, ary tsy maintsy dinihina izany alohan'ny hampiasana azy.
Ity karazana formwork ity dia mivondrona avy amin'ny panne interlocking na rafitra modular, vita amin'ny plastika maivana sy matanjaka. Ny famolavolana plastika dia miasa tsara amin'ny tetikasa kely misy asa miverimberina, toy ny trano fonenana lafo vidy.
Ny formwork plastika dia maivana ary azo diovina amin'ny rano, na dia mety amin'ny faritra lehibe sy ampiasaina indray aza izy io. Ny fihenany lehibe dia ny tsy fitoviana kely kokoa noho ny hazo, satria singa maro no namboarina mialoha.
Fanasokajiana ny volavola mifototra amin'ireo singa struktural
Ankoatry ny fanasokajiana amin'ny materialy, ny formwork dia azo sokajiana ihany koa arakaraka ireo singa fananganana tohana:
Ny karazana formwork rehetra dia noforonina arakaraky ny rafitra tohanan'izy ireo, ary ny drafitra fananganana mifanaraka amin'izany dia mamaritra ny fitaovana sy ny hateviny. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fananganana formwork dia mitaky fotoana, ary afaka maneho eo anelanelan'ny 20 sy 25% amin'ny vidin'ny rafitra. Mba hanalefahana ny vidin'ny asa-tany, diniho ireto torohevitra manaraka ireto:
Ny drafitra fananganana dia tokony hampiasa indray ireo singa sy haitao fananganana araka izay azo atao mba hamelana ny fampiasana ny formwork.
Rehefa miasa miaraka amin'ny volavola hazo izy dia tokony hokapaina ho lehibe izay azo ampiasaina indray.
Ny rafitra vita amin'ny beton dia tsy mitovy amin'ny endrika sy tanjona. Toy ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra momba ny tetikasa, tsy misy safidy tsara kokoa noho ny ambiny ho an'ny rindranasa rehetra; ny formwork mety indrindra amin'ny tetikasanao dia miovaova arakaraka ny famolavolana trano.
Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Jack screw azo ovaina, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana, Sifotra amin'ny fantsom-by vy, Fehikibo Scaffolding Ringlock, Fizaran-tsarimihetsika Ringlock,